सचेत रहौं, हाइड्रोनेफ्रोसिसले मिर्गौला बिगार्न सक्छ ! « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७७, २२ मंसिर सोमबार २०:१७ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार । हाइड्रोनेफ्रोसिसलाई सामान्य भाषामा मिर्गौला सुन्निनु भनेर बुझिन्छ । पिसाव बन्ने स्थानदेखि पिसाव निस्कने नलीको कुनैपनि स्थानमा केहि बाधा पुगेर यदि पिसाव थुनियो भने मिर्गौलामा सुजन (सोइलिङ) देखिन्छ । यसलाई मेडिकल भाषामा हाइड्रोनेफ्रोसिस भनिन्छ । यसैविषयमा केन्द्रित रहेर मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषीकुमार काफ्लेसंग जनस्वास्थ्य सरोकारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
हाइड्रोनेफ्रोसिस किन हुन्छ ?
हाइड्रोनेफ्रोसिस एउटा मिर्गौलामा मात्रै पनि हुनसक्छ । मिर्गौलामा बनेको पिसाब आउने क्रममा कहाँ निर बाधा पुग्यो भन्नेमा निर्भर रहन्छ । पेल्भिस्, पिसाव ल्याउने नली (युरेटेरल) र पिसावथैली जुनसुकै भागमा पनि बाधा पुगेको हुन सक्छ । पिसावनलीमा पत्थरी बन्यो, मासु पलायो, रगत जम्यो, संक्रमण भई पीप जमेमा या विविध कारणले पिसाव थुनिएर मिर्गौला सुन्निन सक्छ ।
जन्मजात नै पिसाव निष्कासन नली साँघुरो भएर हाइड्रोनेफ्रोसिस हुनसक्छ । यसका अलावा पिसाव नलीमा पत्थरी बनेर हाइड्रोनेफ्रोसिस हुनसक्छ । पत्थरीले पिसाव बन्द गराउँछ । विस्तारै मिर्गौल सुन्निन थाल्दछ ।
लामो समयसम्म पत्थरी झरेन वा शल्यक्रिया गरिएन भने भोलीका दिनमा तपाँईले शल्यक्रिया गरेर पत्थरी निकालेपनि हाइड्रोनेफ्रोसिस पुर्ण रुपमा हराएर जाँदैन । अल्ट्रासाउन्ड गर्न जाँदा जीवनभर हाइड्रोनेफ्रोसिस देखाउँछ । कहिलेकाहीँ प्रोस्टट ग्ल्यान्ड बढेर, पाठेघर खसेर पनि पिसाव थुनिएर हाइड्रोनेफ्रोसिस हुन सक्छ ।
के हाइड्रोनेफ्रोसिसले मिर्गौला बिर्गाछ ?
हाइड्रोनेफ्रोसिस बारम्बार भइरह्यो भने यसले मिर्गौला बिगार्न सक्छ । यसले मिर्गौलाको काम गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउँन सक्छ । किनकी त्यो थुनिएको पिसावमा शक्ति हुन्छ । तपाईले जोडले पिसाव फेर्नुहुन्छ तर त्यो पिसाव निख्रिदैन वा मिर्गौलाबाट पुरा पिसाव झर्न पत्थरी वा अन्य कुनै कारणले तल पिसावथैलीमा जान पाउँदैन भने त्यो मिर्गौला बिगार्ने बहाना बन्न सक्छ । त्यसकारण हाइड्रोनेफ्रोसिसको तत्काल उपचार गराउनुपर्दछ ।
हाइड्रोनेफ्रोसिस्का प्रकारहरुका बारेमा बताईदिनुहोस न ?
हाइड्रोनेफ्रोसिस् माइल्ड, मोडरेट र सिभियर गरि तीन प्रकारका हुन्छन् । पिसाव थुनिएपछि संक्रमणको खतरा बढ्छ । संक्रमणले विस्तारै पत्थर बनाउँन थाल्दछ । त्यसकारण हाइडोनेफ्रोसिसलाई हेलचेक्र्याई गर्न भने हुँदैन । सबै हाइड्रोनेफ्रोसिस्लाई डाक्टरले पनि ठिक पार्न सक्दैनन् ।
बालबालीकालाई किन हुन्छ हाइड्रोनेफ्रोसिस ?
कतिपय साना बालबालीकाहरुले पिसाव फेर्दा पिसाबथैलीबाट पिसाव मिर्गौला तिरै फर्किएर जानसक्छ । यसलाई भीजाइकोयुरेटेरल रिफ्लक्स Vesicoureteral reflux (भीयुआर) भनिन्छ । सामान्यतया यसरी उल्टो जान नहुने हो । तर, बालबालीकाले पिसाव फेर्दा बारम्बर पिसाव मिर्गौलामा गयो भने यसले मिर्गौलामा जटिल समस्या निम्त्याउन सक्दछ । समयमै उपचार गरिएन भने बच्चालाई हाइड्रोनेफ्रोसिस हुनसक्छ ।
उपचार पद्यतीका बारेमा बताइदिनुहोस न ?
हाइड्रोनेफ्रोसिसको उपचार धेरै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । अवस्था सामान्य भए वेट् एण्ड वाच गर्न सकिन्छ । कसैकसैको तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसकारण हाइड्रोनेफ्रोसिसलाई हेलचेक्र्याइ नगरी तुरुन्त उपचार गर्नुपर्दछ ।
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । नेपाललाई जापान सरकारले छ वटा एम्बुलेन्स प्रदान गरेको छ । आज यहाँ
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । काठमाडौंको बसुन्धरास्थित महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पतालले कोभिड पोजिटिभ निमोनिया भएकी
जनस्वास्थ्य सरोकार, ललितपुर । ललितपुरको भैसेपाटीस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल र यति एअरलाइन्स तथा तारा एअर